यसै वर्षबाट कक्षा ११ को पाठ्यक्रम फेरिने, थपिने भयो यो एक विषय ! – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/यसै वर्षबाट कक्षा ११ को पाठ्यक्रम फेरिने, थपिने भयो यो एक विषय !
यसै वर्षबाट कक्षा ११ को पाठ्यक्रम फेरिने, थपिने भयो यो एक विषय !
काठमाडौँ, यसै शैक्षिक सत्रबाट कक्षा ११ मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार अध्ययन गर्नुपर्ने भएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्रमा प्रकाशित छ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक केशव दाहालले नयाँ शैक्षिक सत्रबाट कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरिने जानकारी दिनुुभयो । “त्यसका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुुभयो । कक्षा ११ मा पनि यसै वर्ष नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने तयारी छ । त्यसअनुसार अब कक्षा ११ मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले छ सय पूर्णाङ्कको अध्ययन गर्नुपर्नेछ । नयाँ पाठ्यक्रमअनुुसार अब नेपाली, अङ्ग्रेजी र सामाजिक अध्ययन गरी तीन विषय अनिवार्य पढ्नु पर्नेछ ।
ऐच्छिक विषयका हकमा विज्ञहरूलाई पाठ्यपुस्तक लेख्न आग्रह गरिएको र पुस्तक अध्ययन गरी स्वीकृति दिइने जानकारी महानिर्देशक दाहालले दिनुभयो । त्यसका लागि असारसम्म पाठ्यपुस्तककोे नमुना पठाउने र स्वीकृति लिन सक्ने समयावधि दिइएको छ । यसका साथै कक्षा ११ को अनिवार्य गर्न लागिएको सामाजिक अध्ययनको माध्यमसमेत नेपाली हुने भएको छ । सामाजिकमा नेपाली कला, संस्कृति र मौलिक पहिचानमूूलक विषयवस्तुको पठनपाठनका लागि नेपाली नै उपयुक्त हुने सुझावका आधारमा यस खालको निर्णयमा पुगिएको जानकारी अधिकारीहरूले दिएका छन् ।
नेपालमा शक्तिसाली देवीको मन्दिर जहाँ ऐनै ऐनाले भरी भरीभराउ छ, ॐ लेखी भेटी स्वरुप सबैले सेयर गरौ
कोरोनाबाट जोगिन भन्दै कर्णालीका बासिन्दाले गरे कुल देउताको पूजा
स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो : बालबालिकामा संक्रमण बढ्यो, अभिभावक सचेत हुनुस्
आज झन् बढ्यो अमेरिकी डलरसहित यी ९ देशका मुद्राको भाउ
कोरोनाकै कहरकाबीच बागलुङमा उच्च ज्वरो आएर अस्पताल पुगेका बिरामीमा देखियो अर्को रोग